Cunto 6 xabbo - cuntada
Gaar ahaan waa caan u ah cuntooyinkaas oo qoraagu yahay nafaqe yaqaan nafaqo oo si fiican u yaqaan. Tani waxay sharraxeysaa caanaha cuntooyinka diinta "6 xayawaan", sababtoo ah waxa sameeyay Anna Johansson - dhakhtar ka socda Iswiidhen. Waxay hubaal tahay: ha ahaato inaad iska diidid wax walba si aad u yareyso miisaanka!
Astaamaha asaasiga ah ee cuntada 6-xayawaanka ah
Qoraaga cuntadu wuxuu leeyahay: Haddii aad wax kasta oo saxda ah sameyso, maalin walba miisaankaagu wuxuu hoos u dhigi doonaa 500-800 garaam, tanina inkastoo xaqiiqda ah inaadan la dagaalamin dareenka gaajada. Xaalad aad u muhiim ah - faahfaahin kasta ayaa muhiim u ah nidaamka la soo jeediyay, waxna lagama bedeli karo - maaha wax soo saarkooda, ama astaamahooda, ama xitaa in badan.
Cuntada oo dhan waxay ka kooban tahay dhowr labbo oo isku-daboolan oo isku xiga - taas oo ah, maalin kasta waxaa loo oggol yahay in uu cuno hal shey gaar ah. Waxaa la rumeysan yahay in cunno hal cuno ka badan hal maalin oo isku xiga uu waxyeello u keeno, oo macnaheedu yahay, cuntadii qiyaasta "6 xayawaanka" ayaa si adag u hoggaansamaan mabda'a.
Waad ku mahadsan tahay xaqiiqda ah in qaybta ciyaarta lagu daro cuntada, way fududahay in la wareejiyo, xitaa maskaxiyan. Ku billow adigoo sawir qaadaya daisy leh lix tufaax, adiga oo mid kasta oo ka mid ah maalmaha ka mid ah cunnooyinkaaga. In aad dardargeliso hal-abuurka qaboojiyaha, ma aad mari doontid, sababtoo ah sawirka ayaa si joogto ah kuu xusuusin doona ujeedadaada inaad yareyso miisaanka!
Aroortii maalin kasta waa lagama maarmaan miisaanka, iyo qor inta daqiiqo ee aad lumisay maalin kasta. Fiidkii, jeex jeex-jeex ah - oo waxaad arki doontaa in aad si dhakhso ah ujirta ujeeddadaada!
Qaybteeda, cuntokan waa nafaqada caadiga ah ee protein-carbohydrate - sidaas darteed nidaamku wuxuu ku habboon yahay qaabka cuntooyinka kala duwan ee caanka ah, taas oo caddaynaysa waxtarkeeda marar badan.
Caadi ahaan, jidhku si deg-deg ah ayuu u ogaanayaa in aad hoos u dhigtay cuntada oo hoos u dhigta dheef-shiid kiimikaad hooseeya . Mabda'a isbedelka wuxuu ka dhigayaa inuu isku dhexjiro oo uu ka shaqeeyo habka caadiga ah, iyada oo aan la dhimi karin dheef-shiid kiimikaadka iyo xajmiga miisaanka.
Sida cunto kasta oo gaaban, ma hubineyso natiijada ilaalinta haddii aad ku noqoto cuntada caadiga ah. Isticmaal cuntada sida habka aad ugu beddelan karto cuntada saxda ah - ka dhig bur iyo macaan, adigana ma aha oo kaliya inaad taageerto, laakiin sidoo kale waxay hagaajisaa natiijada.
Cuntada 6 xayawaan - liiska faahfaahsan
Tixgeli menu faahfaahsan maalin kasta. Tixgeli - haddii aad qabto cudur ka mid ah xubnaha gudaha, ka hor intaadan isticmaalin cunto kasta waa inuu la tashado dhakhtarkaaga, ama ugu yaraan u qoro talabixin online ah. Sidaa darteed, cuntada "6 tufaax", cuntada cuntada iyo roodhida:
1. Maalinta ugu horeysa ee borotiinka - kalluunka (kaliya 500 g), oo waxaad isticmaali kartaa cuntokan:
quraacda - qashinka la dubay;
qadada - salmon qashin qafiif ah;
fududaynta galabnimada - salmon light-salmon leh caleen salaar;
casho - maraq kalluun leh geedo iyo dhir udgoon.
2. Maalinta labaad ee carbohydrate - khudradda (ilaa 1.5 kg), waxaadna isticmaali kartaa cuntokan:
quraac - baradho la kariyey;
casho - salad ah qajaarka iyo yaanyada;
fududaynta galabnimada - saliidda la shiilay leh basasha iyo karootada;
Casho: saladh leh xayawaanka duban iyo Kaabashka Peking.
3. Maalinta sadexaad waa borotiinka - digaag (500 g kaliya), cuntadu waxay noqon kartaa sida soo socota:
quraac - digaag la kariyey oo la kariyey;
qadada - maraq digaag leh cagaarka;
Cuntada galabnimo: saladh digaag iyo cagaarka;
casho - maraq digaag leh oo yar yar ee hilibka digaaga.
4. Maalinta afaraad ee carbohydrate - badarka (200 garaam oo qallalan qallalan) maalintii. Cuntada ayaa noqon karta sida soo socota:
quraac - rooti badar, shaaha;
qadada - oatmeal dareere;
subaxdii subixii - bac miro ah, shaaha;
cashada - boorashka karbarka oo leh karootada iyo basasha.
5. Maalinta shanaad ee borotiinka - curd (500 g), iyo cuntadu waxay noqon kartaa sida soo socota:
Quraac - shaah leh caano;
cashada - jiis, caleenta caanaha;
Cuntada galabnimada - syrniki, shaah;
Casho - joodariga jaalaha ah.
6. Maalinta lixaad ee carbohydrate waa miro (illaa 1.5 kg), cuntadu waxay noqon kartaa sida soo socota:
quraac - rooti la dubay;
cashada - salad baradho, casiir;
Cuntada galabnimada - casiirka, muuska;
Cuntada - qashinka.
Waxaad ka fekeri kartaa in aad ka badan tahay menuka, waxa ugu muhiimsan maaha inaad ka baxdo cuntada maalin kasta.
Cuncunka leh maadada loo yaqaan 'uterine myomas'
Sidee Dana Borisova lumisay miisaanka?
Waxa aad cuni kartid daawada pankreatitis - cuntada lagu daaweeyo cudurka
Cuntada "20 kg 20 maalmood"
Cunto loogu talagalay polyps-ka xargaha
Qarsoonaanta miisaanka laga soo qaado Kelly Osbourne
Cunto dermiyaal ah oo ka soo jeeda Maya Plisetskaya iyo fursado kale
Cunto cunada cunugga
Cuntada dhakhtarka - 14 maalmood
Gatchina - Soojiidashada
Beeraha Qaranka ee Grenada
Erosion ee uurka
Booties for wiilka
Yatryshnik - guryaha dawooyinka iyo contraindications
Suunka ayaa laga sameeyey faashad "Bantik"
Kalluun fur furan
Geedka geedka lagu beero xilliga dayrta
Layli culus oo culus
Hugh Hefner wuxuu iibiyay xayeysiinta Playboy Mansion ee deriska si aad u fiican
In Instagram Guillaume Cane muuqatay sawirka Marion Cotillard
Kurt Cobain iyo Courtney Love
Wedding in style Yurub ah
Cuntada leh xanuujinta oo leh kiimiko hooseeya
Sidee loo barayaa garsoorka?
Baradhada oo leh basbaas
Qiimaha kuraasta sare ee quudinta
Fikradaha naqshadaynta ciddiyaha
Yaa heli doona doorka Kate Middleton ee filimka taariikhiga ah?